साइकल चलाउनेलाई क्यान्सर लाग्दैन :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
के तपाईं लामो जीवन बाँच्न चाहनु हुन्छ ? अथवा क्यान्सरको खतरालाई कम गर्न चाहनु हुन्छ ? त्यसो हो भने छोटो दूरीका लागि तपाईंले सवारी साधनको रूपमा साइकललाई रोज्नुपर्ने हुन्छ । यो कुनै गफ होइन, वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरेको तथ्य हो भन्ने कुरा बीबीसीले लेखेको छ ।
अध्ययनअनुसार यातायातमा साइकलको प्रयोग हृदयघात र क्यान्सरको आशंकलाई एकदमै न्यून गराउँछ । बेलायतमा नियमित आउने जाने साढे दुई लाख मानिसमा गरिएको अध्ययनले यस्तो देखिएको हो । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने वा कारमा हिँड्डुल गर्नेभन्दा सडकपेटीमा पैदल हिँड्नु फाइदाजनक भएको पाइयो ।
ग्लासगोको टिमले यो अध्ययन गरेको थियो । उनी भन्छन्, एक पटक नियमित कामकाजको हिस्सा बनेपछि साइकल चलाउने कुनै इच्छाशक्ति चाहिँदैन, जस्तो कि जिम जाने इच्छा हुन्छ । पाँच वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनले सक्रिय रहने मानिसको तुलना तिनीहरूसँग गरिएको थियो, जो बी स्थिर रहन्छन् ।
अध्ययनमा संलग्न गराएका व्यक्तिमध्ये दुई हजार चार सय ३० जनाको मृत्यु भएको थियो । तीन हजार सात सय ४८ जनालाई क्यान्सर भएको थियो । एक हजार एक सय १० जनामा मुटुसम्बन्धी समस्या देखिएको थियो । तर अध्ययनका बेला लगातार साइकल चलाउनेहरूमा मृत्युको सम्भावना ४१ प्रतिशतले कम भएर गएको थियो । यसमा क्यान्सरको सम्भावना ४५ र मुटुसम्बन्धी रोगको सम्बन्धना ४६ प्रतिशत थियो ।
साइकल चलाउनेहरूले एक सातामा औसत झन्डै ४८ किलोमिटर यात्रा गरेका थिए । हड्डीको विरामीका लागि त साइकल चलाउनेहरूलाई बरदान सावित भयो । हिँड्नेहरूलाई मुटुसम्बन्धी रोग एकदमै न्यून लाग्छ । तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने हिँड्दा ती व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्छ, जो सातामा कम्तीमा दस किलोमिटर हिँड्छन् ।
ग्लासगो युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा.जेसन गिलले बीबीसीलाई दिएको जानकारीअनुसार जो व्यक्ति क्रियाशीले यात्रा गर्छ, अथवा क्रियाशील यात्रा गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई क्यान्सर र मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । तपाईं दिनहुँ काममा जानुपर्छ भने साइकललाई साथी बनाउनुस्, त्यसले रोग लाग्नबाट बचाउँछ । बानी परेपछि इच्छाशक्तिको कुरा पनि आउँदैन । विकसित देशमा रेलको लिकसँगै साइकल लेन पनि बनाइदिएको हुन्छ । हाम्रो देशमा पनि अब विकास गर्दा साइकल लेन बनाउन छुटाउनु हुँदैन ।
साइकल र सार्वजनिक यातायात दुवै प्रयोग गर्ने मान्छेलाई पनि स्वास्थ्यमा फाइदा नै पुग्छ । धूमपान, खानपान र मोटोपना जस्ता अन्य सम्भावित प्रभावलाई हटाएपछिको त्यो असर थियो । बेलायती मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित भएको उक्त अध्ययनको अर्थ थियो, कुनै पनि रोगको स्पष्ट कारण वा असर निर्धारण गर्न सम्भव हुँदैन । अध्ययनअनुसार साइकल चलाउनेलाई क्यान्सरको खतरा न्यून हुन्छ, तर वजन कम गर्न होइन ।
व्यायामका लागि साइकल चलाएर घुम्नुलाई राम्रो मानिन्छ । त्यसो त दुवै चलायमान हुन्छ । बेलायतको क्यान्सर अध्ययनका क्लेयर हायडा भन्छन्, यो अध्ययनले तपाईंको दैनिक क्रियाशीलताले प्राप्त गर्ने सम्भावित लाभलाई उजागर गर्न सहयोग पुग्छ । तपाईंलाई जिम जान अथवा म्याराथन दौडिराख्नु आवश्यक हुँदैन । हल्का शरीर तताउने र श्वास प्रश्वासमा थोरै तीव्रता ल्याउनु भयो भने स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ । यी काम तपाईंले साइकल कुदाएर होस् वा घरको कामबाट गर्नुहोस्, त्यसले सबैलाई फाइदा पुग्छ ।
Tarun Khabar0response बिहिबार,१४ बैशाख २०७४ 742 Views